Markab Waday In kabadan Laba kun Oo Qaxooti ah oo Boosaaso soo Gaaray – STAR FM SOMALIA
Waxaa dekada Boosaaso ee gobalka Bari kusoo xirtay markabka Nawaal 3 oo inkabadan Laba kun oo qaxooti Soomaaliyeed kasoo raray dalka Yemen oo ay ka socdaan dagaalo xoogan.
Dadka la socday Markabka ayaa u badnaa Carruur iyo Haween kuwaasi oo ay ka muuqatay dhibaatada safarka.
Dadkaani ayaa waxaa Dekada kusoo dhaweeyay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka iyo Gudiyada loo xil saaray arrimaha Qaxootiga waxaana dadkaasi Markabka laga dejinayay Illaa xalay Seddax Saac.
Guddiga Badbaadinta iyo Samata bixinta Qaxootiga Soomaaliyeed oo uu horkacayay gudoomiyahooda Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, Guddiga Gurmadka ee Boosaaso, maamulka degmadaasi iyo kan gobalka Bari, dhaqaatiir iyo dad kale ayaa garab xoogan siiyay dadkaasi inta laga soo daad gureynaayay Markabka.
Dadka la keenay ayaa xaaladooda waxa ay ahayd mid aad u wanaagsan, waxaana la geeyay xero loogu tala galay in lagu nasiyo, iyadoo ka dibna halkaasi laga sii amba bixin doono.